အသုံးပြုခြင်းအတွက် သတ်မှတ်ချက်များ | HTC Myanmar
သက်ရောက်သောရက်စွဲ- ဇူလိုင်လ ၂၀ ရက်၊ ၂၀၁၁
ဆိုက်ဖြစ်သော www.htc.com မှကြိုဆိုပါသည်။ အောက်ပါ HTC.com သတ်မှတ်ချက်နှင့်အခြေအနေများသည် သင်နှင့် HTC ကော်ပိုရေးရှင်း၊ 23 Xinghua Road၊ Taoyuan District၊ Taoyuan City 330, Taiwan၊ ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်အမှတ် ၁၆၀၀၃၅၁၈ နှင့် ၄င်း၏အဖွဲ့ဝင်များ (HTC) အကြားသတ်မှတ်ခြင်းဖြစ်ပြီး၊ ဆိုက်အားသင့်၏သုံးစွဲမှုကိုထိန်းချုပ်သော တရားဝင်သဘောတူညီချက်တစ်ခုပါဝင်ပါသည်။ ဆိုက်တွင် HTC နှင့်အချို့တတိယပုဂ္ဂိုလ်အကြောင်းအရာပေးသူများမှ သတင်းအချက်အလက်များနှင့် အရင်းအမြစ်များပါသည့် အင်တာနက်စာမျက်နှာများ ပါဝင်သည်။ HTC.com သတ်မှတ်ချက်နှင့် အခြေအနေများသည် သင့်၏ဆိုက်သုံးစွဲမှုကိုသာ ထိန်းချုပ်သည်။ ၄င်းသည် အခြား HTC ၀က်ဘ်ဆိုက်များ (ဥပမာ - အွန်လိုင်းစတိုး (သို့) အချို့နယ်မြေများတွင်ရနိုင်သော တွဲဖက်ပစ္စည်းစတိုးဝက်ဘ်ဆိုက်)၊ ထုတ်ကုန်ပစ္စည်းများ၊ ဆော့ဖ်ဝဲလ် (သို့) ၀န်ဆောင်မှုများအားအသုံးပြုခြင်းနှင့် မသက်ဆိုင်ပါ။ ၄င်းသည် HTC နှင့်ထားရှိသော အခြားသဘောတူညီချက်များကို ပြင်ဆင် (သို့) ပြောင်းလဲခြင်း၊ (သို့) နောက်မှထည့်သွင်းခြင်းတို့ကိုလည်းမပြုလုပ်ပါ။ HTC သည် သင့်အား အခါအားလျော်စွာပြင်ဆင်သော လုံခြုံရေးဆိုင်ရာဖော်ပြချက်နှင့် HTC လုပ်ဆောင်မှုဆိုင်ရာစည်းမျဉ်းများအပါအ၀င် ထို HTC.com သတ်မှတ်ချက်နှင့်အခြေအနေများကို လက်ခံခြင်းအပေါ်မူတည်၍ ဆိုက်အားသင်ဝင်ရောက်နိုင်ရန်ခွင့်ပေးသည်။ ဤတွင် အခါအားလျော်စွာပြင်ဆင်သော လုံခြုံရေးဖော်ပြချက်နှင့် HTC လုပ်ဆောင်မှုဆိုင်ရာစည်းမျဉ်းတို့လည်း အပါအ၀င်ဖြစ်သည်။ ၄င်းတို့သည် HTC.com သတ်မှတ်ချက်နှင့်အခြေအနေများ (စုပေါင်းခေါ်ဆိုလျှင် - သတ်မှတ်ချက်များ) ၏အစိတ်အပိုင်း (သို့) ထည့်သွင်းထားခြင်းဖြစ်ပြီး ဆိုက်သုံးစွဲခြင်းနှင့်သက်ဆိုင်သည်။ “ သင် ဆိုသည်မှာ ဆိုက်ကိုဝင်ရောက်သူ (သို့) ဆိုက်မှရနိုင်သောဝန်ဆောင်မှုများကိုသုံးသူကိုဆိုလိုသည်။ (၀န်ဆောင်မှုများ)
HTC ၏လုံခြုံရေးဆိုင်ရာဖော်ပြချက်တွင် သင်နှင့်သင့်၏ဆိုက်သုံးခြင်းဆိုင်ရာသတင်းအချက်အလက်များကို ရယူခြင်းနှင့်အသုံးပြုခြင်းတို့အတွက် ၏လုပ်ထုံးလုပ်နည်းဆိုင်ရာအချက်အလက်များ ပါဝင်သည်။ သင်သည် HTC မှ ၄င်း၏လုံခြုံရေးဆိုင်ရာဖော်ပြချက်နှင့်အညီ သင်နှင့်သင့်အကောင်ဆိုင်ရာ သတင်းအချက်အလက်များကို ရယူခြင်း၊ အသုံးပြုခြင်း၊ ထုတ်ဖော်ခြင်း၊ ထုတ်လွှတ်ခြင်း၊ လုပ်ဆောင်ခြင်း၊ သိမ်းဆည်းခြင်းများကို ၀န်ဆောင်မှုများအတွက် ဆိုက်အားအကျိုးသက်ရောက်စေရန် လုပ်ဆောင်နိုင်သည်ကို သဘောတူရမည်။ လုံခြုံရေးဆိုင်ရာဖော်ပြချက်နှင့်အညီ သင့်ကိုယ်ရေးအချက်အလက်များကို အသစ်ပြင်ခြင်း၊ ပြောင်းလဲခြင်း၊ ဖျက်ခြင်းများပြုလုပ်နိုင်သော အခွင့်အရေးသင့်တွင်ရှိသည်။ ဆိုက်မှရယူသောကိုယ်ရေးအချက်အလက်များကို ထိုင်ဝမ်နှင့် HTC (သို့) ၄င်း၏၀န်ဆောင်မှုပေးသူများ အထောက်အပံ့ပစ္စည်းပေးထားသည့်မည်သည့်နိုင်ငံတွင်မဆို သိမ်းဆည်းခြင်း၊ အသုံးပြုလုပ်ဆောင်ခြင်းတို့ပြုလုပ်နိုင်သည်။ ဆိုက်ကိုသုံးခြင်းအားဖြင့် သင်နေထိုင်ရာနိုင်ငံပြင်ပသို့ သတင်းအချက်အလက်များ လွှဲပြောင်းခြင်း၊ မှတ်သားခြင်းနှင့်သိမ်းဆည်းခြင်းတို့ပြုလုပ်ရန် သင်သဘောတူပြီးဖြစ်သည်။ လုပ်ဆောင်ခြင်းအတွက် တရားစီရင်ပိုင်ခွင့်နောက်တစ်ခုတွင် သတင်းအချက်အလက်များအား တရားရုံးများ၊ ဥပဒေပြဋ္ဌာန်းမှုနှင့်အမျိုးသားလုံခြုံရေးအာဏာပိုင်တို့မှ ၀င်ရောက်ကြည့်ရှုနိုင်သည်။ လုံခြုံရေးဆိုင်ရာဖော်ပြချက်ကို ဖတ်ရှုပါ။
ဆိုက်အားမ၀င်ရောက်ခင် (သို့) မသုံးခင် ဤသတ်မှတ်ချက်များကို ကျေးဇူးပြုပြီးဖတ်ပါ။ သတ်မှတ်ချက်များကိုသဘောတူသည်ဟုညွှန်းဆိုသောအကွက်တွင် ကလစ်လုပ်ခြင်း (သို့) ဆိုက်အားဝင်ရောက်ခြင်း (သို့) သုံးခြင်း (ထိုဝင်ရောက် (သို့) သုံးစွဲခြင်းအားဖြင့်သဘောတူညီချက်ကို ဥပဒေမှခွင့်ပြုထားသည်) ဖြင့် ဤသက်မှတ်ချက်များကို သင်လိုက်နာပြီးဖြစ်သွားသည်။ ဤသတ်မှတ်ချက်များကို မလိုက်နာလိုပါက သတ်မှတ်ချက်များကိုသဘောတူခြင်း (သို့) ဆိုက်သို့ဝင်ရောက်ခြင်း (သို့) သုံးစွဲခြင်းမပြုလုပ်ပါနှင့်။ ဆိုက်သည် ၁၃ နှစ်အောက်ကလေးများအတွက် ရည်ရွယ်ခြင်းမရှိပါ။ သင်သည် ၁၃ နှစ်အောက်ဖြစ်ပါက ဆိုက် (သို့) ၀န်ဆောင်မှုများကိုမ၀င်ရောက်သင့်ပါ၊ အမည်၊ လိပ်စာ၊ ဖုန်းနံပါတ် (သို့) အီးမေးလ်လိပ်စာစသော သင်နှင့်ပတ်သက်သည့် အချက်အလက်များကို (တိုက်ရိုက် (သို့) သတင်းလွှာ၊ ဘလော့ဂ် စသည်) HTC သို့မပေးသင့်ပါ။ e-Club (သို့) YouClub ကိုသုံးရန် (သို့) မှတ်ပုံတင်ရန် သင်သည် အနည်းဆုံးအသက် ၁၃ နှစ်ရှိရမည်။ e-Club (သို့) YouClub တွင်စာရင်းသွင်းခြင်းအားဖြင့် သင်သည် ၁၃ နှစ် (သို့) ၄င်းထက်ကြီးကြောင်း သက်သေခံပြီးဖြစ်သည်။ သင်သည် အသက် ၁၃ နှစ် (သို့) ကျော်သည်၊ သို့သော် ဒေသဆိုင်ရာဥပဒေအရ လူကြီးအဖြစ်သတ်မှတ်မခံရသေးပါက (နိုင်ငံအများစုတွင် ၁၈ နှစ်) ဆိုက်သို့ဝင်သင့်မ၀င်သင့်၊ HTC သို့ ကိုယ်ရေးအချက်အလက်များပေးသင့်မသင့်မဆုံးဖြတ်ခင် သင့်မိဘ (သို့) အုပ်ထိန်းသူနှင့် ဤလုံခြုံမှုဖော်ပြချက်ကို သင့်နှင့်သင့်မိဘ (သို့) အုပ်ထိန်းသူသေချာနားလည်စေရန် ဖတ်ရှုသင့်သည်။ မိဘများနှင့်အုပ်ထိန်းသူများအား ၄င်းတို့၏ကလေးများ အင်တာနက်၊ မိုဘိုင်းနှင့်အခြားကိရိယာများသုံးစဉ် စောင့်ကြပ်ရန် အကြံပြုပါသည်။ သင်စပိန်တွင်နေပါက အထက်ပါအသက်ကန့်သတ်ချက်သည် ၁၄ အောက်ကလေးများနှင့်သက်ဆိုင်သည်။ ဗီယက်နမ်တွင်နေထိုင်ပါက အထက်ပါအသက်ကန့်သတ်ချက်သည် ၁၅ နှစ်အောက်ကလေးများနှင့်သက်ဆိုင်သည်။ နယ်သာလန်တွင်နေထိုင်ပါက အထက်ပါအသက်ကန့်သတ်ချက်သည် ၁၆ နှစ်အောက်ကလေးများနှင့်သက်ဆိုင်သည်။ ပြင်သစ်တွင်နေထိုင်ပါက အထက်ပါအသက်ကန့်သတ်ချက်သည် ၁၈ နှစ်အောက်ကလေးများနှင့်သက်ဆိုင်သည်။ HTC သည် အပိုင်း ၁၈ နှင့်အညီ ဤသတ်မှတ်ချက်များကို မည်သည့်အချိန်တွင်မဆိုပြောင်းလဲနိုင်ရန် အခွင့်အရေးရှိသည်။
HTC အကြောင်းအရာ၊ တစ်ဦးတည်းပိုင်အခွင့်အရေး၊ လိုင်စင်၊ အသစ်များ
ထပ်ဆောင်းသတ်မှတ်ချက်များအား သင့်၏ဆိုက်ကိုအသုံးပြုမှု (သို့) ဆိုက်၏လုပ်ဆောင်မှုတစ်ခုခုကိုအသုံးပြုမှု၊ (သို့) ဆိုက်မှ (သို့) ၀န်ဆောင်မှုမှတဆင့် ဒေါင်းလုပ်လုပ်ခြင်းတို့နှင့်ဆက်စပ်ပြီး သင့်အားတင်ပြနိုင်သည်။ ရည်ညွှန်းချက်အားဖြင့် ဤသတ်မှတ်ချက်များတွင်ထည့်သွင်းထားသော ထပ်ဆောင်းသတ်မှတ်ချက်များကို သင်သဘောတူညီရမည်။ ထပ်ဆောင်းသတ်မှတ်ချက်များကိုသဘောမတူပါက ထိုထပ်ဆောင်းသတ်မှတ်ချက်များနှင့်ဆိုင်သော လုပ်ဆောင်ချက်များ (သတ်မှတ်ချက်များသည် တိကျသောလုပ်ဆောင်ချက်များကိုကန့်သတ်ပါက) ကို သုံးခြင်း (သို့) ၀ယ်ယူခြင်းတို့မပြုပါနှင့်၊ (သို့) ဆိုက်သုံးခြင်းကိုရပ်တန့်ပြီး၊ သက်ဆိုင်သောဝန်ဆောင်မှုအကောင်မည်သည်ကိုမဆိုရပ်ဆိုင်းပါ။ တတိယပုဂ္ဂိုလ်များဆီမှ ထုန်ကုန်ပစ္စည်းများ၊ ၀န်ဆောင်မှုများဝယ်ယူခြင်း (သို့) ဆော့ဖ်ဝဲလ်များအသုံးပြုခြင်း၊ ဒေါင်းလုပ်လုပ်ခြင်းတို့ပြုလုပ်သောအခါ ထိုတတိယပုဂ္ဂိုလ်များ၏ ထပ်ဆောင်းသတ်မှတ်ချက်နှင့်အခြေအနေများကိုလည်း သင်လိုက်နာရမည်။
လျှို့ဝှက်နံပါတ်များ၊ သင့်နှင့်ဆက်ဆိုင်သည်ဟုယူဆသောအီလက်ထရောနစ်အက်ဥပဒေ ဤဆိုက်ပေါ်ရှိအချို့လုပ်ဆောင်မှုများသည် သင့်အား အသုံးပြုသူအမည်၊ လျှို့ဝှက်နံပါတ်တို့ဖြင့်မှတ်ပုံတင်ရန် (ဥပမာ - e-Club (သို့) YouClub ၀င်ရန်၊ ရှိပါက)၊ (သို့) ဤဆိုက်၏လူထုအားထောက်ပံ့မှုအပိုင်းတွင် ရေးသွင်းချက်များတင်ရန် လိုအပ်သည်။ သင်မှတ်ပုံတင်ပါက HTC အား လက်ရှိဖြစ်သော၊ ပြည့်စုံသော၊ တိကျသော သတင်းအချက်အလက်များပေးရမည်ဖြစ်သည်။ သင့်လျှို့ဝှက်နံပါတ်နှင့်အသုံးပြုသူအမည်၏ လျှို့ဝှက်မှုကိုထိန်းသိမ်းခြင်းအတွက်တာဝန်ရှိပြီး၊ ထိန်းသိမ်းရန်လည်း သင်သဘောတူရမည်။ သင့်အသုံးပြုသူအမည်နှင့်လျှို့ဝှက်နံပါတ်ကို ဤဆိုက်ပေါ်တွင်အသုံးပြုပါက HTC မှနေ၍ သင့်၏အသုံးပြုခြင်းဖြင့် သင်သည်ဥပဒေအရလိုက်နာရမည်ဖြစ်ပြီး သင့်အကောင့်တွင်ဖြစ်သော မည်သည့်ဖြစ်ရပ်ကိုမဆို သင်တာဝန်ယူမည်ဟု ယူဆသည်။ ခွင့်ပြုချက်မရပဲ သင့်အကောင်းအားသုံးစွဲခြင်း (သို့) မည်သည့်လုံခြုံရေးအပိုင်းမဆိုယိုယွင်းခဲ့ပါက သင်သည် HTC အား အပိုင်း ၁၈ တွင်ဖော်ပြထားသော အီးမေးလ်လိပ်စာသို့ချက်ခြင်းအကြောင်းကြားပါမည်ဟု သင်သဘောတူရမည်။
ဆိုက်သုံးစွဲခြင်း ဆိုက်အားဝင်ရောက်ခြင်းကို ယာယီအားဖြင့်ခွင့်ပြုပြီး၊ ဆိုက်အားရရှိနိုင်သောအခါမှ သင်သုံးနိုင်မည်။ ဆိုက်ကိုအမြဲတမ်းသုံး၍မရနိုင်ပါ။ အဆက်ပြတ်ခြင်းများ (သို့) ကြာရှည်ချွတ်ယွင်းနေမှုများဖြစ်နိုင်သည်။ HTC သည် ဆိုက်တစ်ခုလုံးဖြစ်စေ၊ တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းဖြစ်စေ (မည်သည့်လုပ်ဆောင်ချက်မဆိုပါဝင်) ပြောင်းလဲခြင်း (သို့) ဖယ်ရှားခြင်း၊ ကန့်သတ်ခြင်း (သို့) ၀င်ရောက်ခွင့်ပိတ်ခြင်းတို့ကို မည်သည့်အချိန်မဆို အသိပေးခြင်းမရှိပဲ ပြုလုပ်ခွင့်ရှိသည်။
သင့်လုပ်ဆောင်ချက် ဆိုက်တွင် သင်နှင့် HTC ၊ သင်နှင့် အများပြည်သူဆက်သွယ်မှုပြုနိုင်စေရန်တီထွင်ထားသော ဆက်သွယ်ရေးလုပ်ဆောင်ချက်များ (ဘလော့်ခ်၊ ထောက်ပံ့မှုဖိုရမ်၊ စသည်ဖြင့်) ပါဝင်သည်။ ဆိုက်၏ရည်ရွယ်ချက်နှင့်ဆက်စပ်ကာ၊ သင့်တောသော စာများ၊ အကြောင်းအရာများကို တင်ရန်၊ ပို့ရန်၊ လက်ခံရန်အတွက်သာ ဆိုက်အားသုံးမည်ဟု သင်သဘောတူရမည်။ ဆိုက်အား တမင်ရည်ရွယ်ချက်ဖြင့် ဗိုက်ရပ်စ်များ၊ ထရိုဂျန်များ၊ ပိုးများ၊ လောဂျစ်ဗုံးများနှင့် အန္တရာယ်ဖြစ်စေရန်တမင်ရည်ရွယ်ခြင်း (သို့) နည်းပညာပိုင်းအန္တရာယ်ဖြစ်စေရန်အတွက် အခြားဒုက္ခပေးသည့်အရာများရောက်အောက်လုပ်ခြင်းဖြင့် တလွဲသုံးခြင်းမလုပ်ပါဟု သင်သဘောတူရမည်။ ခွင့်ပြုချက်မရပဲဆိုက်၊ ဆာဗာများ၊ ကွန်ပျူတာများ (သို့) ဆိုက်နှင့်ချိတ်ဆက်နေသောမည်သည့် ဒေတာဘေ့စ်ကိုမဆို ၀င်ရောက်ရန်ကြိုးစားခြင်းမပြုရပါ။ ၀န်ဆောင်မှုအားငြင်းဆန်ခြင်းတိုက်ခိုက်မှု (သို့) ဖြန့်ဝေထားသော ၀န်ဆောင်မှုအားငြင်းဆန်ခြင်းတိုက်ခိုက်မှုမှတဆင့် ဆိုက်အားချိတ်ဆက်ခြင်းမပြုရပါ။ ဆိုက်သုံးစွဲစဉ် အထက် နှင့် လုပ်ဆောင်မှုဆိုင်ရာစည်းမျဉ်း တွင်ဖော်ပြထားသည့်အတိုင်း မမှန်မကန်သုံးစွဲခြင်းမျိုးကိုမလုပ်ပါဟု သင်သဘောတူရမည်။ သင်သည် ဤအပိုင်းကိုချိုးဖောက်ပါက ပြစ်မှုကျူးလွန်ခြင်းအရာအရောက်နိုင်သည်။ HTC မှသက်ဆိုင်ရာဥပဒေပြဋ္ဌာန်းသည့်အာဏာပိုင်များသို့ အဆိုပါချိုးဖောက်မှုကိုတင်ပြပြီး HTC တွင်ရှိနေသော သင့်အမည်နှင့် အခြားသက်ဆိုင်သော သတင်းအချက်အလက်များကို ထုတ်ဖော်ခြင်းအားဖြင့် အဆိုပါအာဏာပိုင်များနှင့် HTC မှ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မည်ဖြစ်သည်။ ထိုကဲ့သို့ချိုးဖောက်မှုရှိသောအခါ ဆိုက်အားသင်၏သုံးစွဲနိုင်ခွင့်သည် ချက်ချင်းအဆုံးသတ်သွားမည်။
HTC သည် ဤအပိုင်းမှ မည်သည့်နေရာတွင်မဆို ချိုးဖောက်သည်ဟုသံသယရှိပါက HTC ဘက်မှဥပဒေအရအရေးယူခြင်းစတင်ပြီး၊ ချိုးဖောက်သူအား ဥပဒေအရတရားစွဲခြင်းပြုလုပ်ရာတွင် ဥပဒေပြဋ္ဌာန်းသည့်အာဏာပိုင်များနှင့် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မည်။ သံသယရှိသောချိုးဖောက်မှုများအား စုံစမ်းစစ်ဆေးရာတွင် သင်သည် HTC နှင့်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မည်ဟု သဘောတူရမည်။ HTC သည် တရားမ၀င်ဟု (သို့) သတ်မှတ်ချက်များကိုချိုးဖောက်သည်ဟု မှတ်ယူသောလုပ်ဆောင်ချက်များအား ဖော်ထုတ်ရန် (သို့) နောက်ကြောင်းလိုက်ခြင်းတွင် အထောက်အကူဖြစ်ရန်အတွက် တစ်ခု (သို့) တစ်ခုထက်ပိုသောဆော့ဖ်ဝဲများကို သွင်းခြင်း၊ အကောင်အထည်ဖော်ခြင်း၊ စီမံခြင်း၊ အလုပ်လုပ်စေခြင်း၊ (သို့) စောင့်ကြည့်ခြင်း၊ (သို့) အခြားနည်းလမ်းများပြုလုပ်ရန် သက်ဆိုင်ရာဥပဒေမှခွင့်ပြုထားသည့် အတိုင်းအတာအထိ ပြုလုပ်ရန်အခွင့်အရေးရှိသည်။
တတိယပုဂ္ဂိုလ်၏အရာများ ဆိုက်တွင် တတိယပုဂ္ဂိုလ်ဝက်ဘ်ဆိုက်များအတွက်လင့်ခ်များပါနိုင်သည်။ (”လင့်ခ်လုပ်ထားသောဆိုက်များ”) လင့်ခ်လုပ်ထားသောဆိုက်များသည် HTC ၏ထိန်းချုပ်မှုအောက်တွင်မရှိပဲ၊ HTC မှလည်း မည်သည့်လင့်ခ်လုပ်ထားသောဆိုက်အတွက်မဆို တာဝန်မရှိပေ။ HTC သည် အဆိုပါလင့်ခ်များကို အဆင်ပြေမှုအတွက်သာထားပေးခြင်းဖြစ်ပြီး၊ ထိုလင့်ခ်များပါဝင်နေခြင်းသည် HTC မှအတည်ပြုပေးထားခြင်း (သို့) ၄င်းတို့၏အော်ပရေတာများနှင့်ဆက်နွယ်ခြင်းကို မဆိုလိုပါ။ လင့်ခ်လုပ်ထားသောဆိုက်ကို သင်ဝင်ရောက်သည့်အခါ အဆိုးအကောင်းသင့်တာဝန်သာဖြစ်သည်။ ထို့အတူ ဆိုက်မှပေးသောဝန်ဆောင်မှုတစ်ခုကိုသုံးသည့်အခါတွင် တတိယပုဂ္ဂိုလ်မှပေးသာအရာကို သင့်ဖုန်းသို့ဒေါင်းလုပ်လုပ်ခြင်း (သို့) တတိယပုဂ္ဂိုလ်မှပေးသော ၀န်ဆောင်မှုများနှင့် လင်ခ်လုပ်ထားသောဆိုက်များကို ၀င်ရောက်ခြင်းတို့ကိုလည်းပြုလုပ်နိုင်သည် (ဥပမာ - လူမှုကွန်ယက်မိတ်ဖက်များ၊ ကြိုးမဲ့ကယ်ရီယာများ နှင့် တတိယပုဂ္ဂိုလ်ဆော့ဖ်ဝဲလ်အက်ပလီကေးရှင်းတီထွင်သူများ) အင်တာနက်ပေါ်တွင် ဖုန်းခေါ်သံများ၊ သီချင်းများ၊ အက်ပလီကေးရှင်းများ၊ စတော့ဈေးနှုန်းများ၊ သတင်းများ၊ မိုးလေ၀သသတင်းများ၊ မည်သည့်အရာမဆို (သို့) သင့်ဖုန်းနှင့်ဆိုက်တွင်သုံးရန် အခြားအရာများနှင့်သတင်းအချက်အလက်များအပါအ၀င် (“တတိယပုဂ္ဂိုလ်၏အရာများ”) တတိယပုဂ္ဂိုလ်မှပေးသော အရာတစ်ခုကို ဆိုက် (သို့) ၀န်ဆောင်မှုမှ တိုက်ရိုက်ဖြစ်စေ၊ သွယ်ဝိုက်၍ဖြစ်စေ သင်ရယူပါက အဆိုပါ တတိယပုဂ္ဂိုလ်၏အရာများကို တတိယပုဂ္ဂိုလ်ပစ္စည်းတင်သွင်းသူထံမှ သင်ရယူခြင်းဖြစ်ပြီး၊ HTC ထံမှရယူခြင်းမဟုတ်ကြောင်း သင်နားလည်ရမည်။ တတိယပုဂ္ဂိုလ်၏အရာများနှင့်ပတ်သက်၍ သင်၏ပတ်သက်မှုသည် ပစ္စည်းတင်သွင်းသူနှင့်ဖြစ်ပြီး၊ HTC နှင့်မဟုတ်ပါ။ တတိယပုဂ္ဂိုလ်၊ လင့်ခ်လုပ်ထားသောဆိုက်များ၊ တတိယပုဂ္ဂိုလ်၏အရာများနှင့်သက်ဆိုင်သော လုံခြုံရေးမူဝါဒများနှင့် အသုံးပြုခြင်းဆိုင်ရာကန့်သတ်ချက်များကို ဖတ်ရှုရန် သင့်တာဝန်ပင်ဖြစ်သည်။ တတိယပုဂ္ဂိုလ်ဝန်ဆောင်မှုများ၊ လင့်ခ်လုပ်ထားသောဆိုက်များ၊ တတိယပုဂ္ဂိုလ်၏အရာများနှင့်ပတ်သက်၍ သင့်ဘက်မှမည်သည့်တောင်းဆိုမှုမဆို ပစ္စည်းတင်သွင်းသူနှင့်သာသက်ဆိုင်ပြီး HTC နှင့်မသက်ဆိုင်ပါ။
သတင်းအချက်အလက်တိကျမှုအတွက် သတိပေးခြင်း ဤဆိုက်သည် လက်ရှိ HTC ၀န်ဆောင်မှုများနှင့်ထုတ်ကုန်ပစ္စည်းများကိုကိုယ်စားပြုရန်ရည်ရွယ်သော်လည်း အချို့သတင်းအချက်အလက်များသည် အဟောင်းများဖြစ်နိုင်သည်။ ဆိုက်သည် အသိမပေးပဲအပြောင်းအလဲလုပ်နိုင်ပြီး သတ်ပုံအမှားများ၊ မတိကျမှုနှင့် ချန်ထားခြင်းများရှိနိုင်သည်။ ဆိုက်တွင်တွေ့ရသောအရောင်များ (ဥပမာ - ထုတ်ကုန်ပစ္စည်းအရောင်) သည် သင့်ကွန်ပျူတာ၏ သတ်မှတ်ချက်များနှင့်ဆက်တင်ပေါ်တွင်မူတည်နိုင်ပြီး တကယ့်အရောင်အားဖော်ပြနိုင်ခြင်းမရှိဖြစ်နိုင်သည်။ ဆိုက်ပေါ်တွင်ပေးထားသော မည်သည့်သတင်းအချက်အလက်ကိုမျှ အမှီပြုခြင်းမလုပ်ပါဟု သင်သဘောတူရမည်။ ၄င်းတို့သည် သင့်၏အဆင်ပြေမှုအတွက်သာ ပေးထားခြင်းဖြစ်သည်။
အသုံးပြုသူအကြောင်းအရာ ဆိုက်တွင် သင်နှင့် HTC ၊ သင်နှင့် အများပြည်သူဆက်သွယ်မှုပြုနိုင်စေရန်တီထွင်ထားသော ဆက်သွယ်ရေးလုပ်ဆောင်ချက်များ (ဘလော့်ခ်၊ ထောက်ပံ့မှုဖိုရမ်၊ စသည်ဖြင့်) ပါဝင်သည်။ အကြောင်းအရာများကို ဆိုက် (သို့) ၀န်ဆောင်မှုတစ်ခုသို့ အသုံးပြုသူများမှ တင်နိုင်သည်။ “ အသုံးပြုသူအကြောင်းအရာ”ဆိုသည်မှာ ဆိုက်အသုံးပြုသူများမှ ဆိုက် (သို့) ၀န်ဆောင်မှုသို့တင်သော သတင်းအချက်အလက်၊ ဂရက်ဖစ်၊ စာသား၊ ဓါတ်ပုံများ၊ ဆော့ဖ်ဝဲလ်၊ အသံဖိုင်များ၊ ဗီဒီယို၊ ဆက်သွယ်ရေးနှင့်အခြားအရာများနှင့် မည်သည့်အကြောင်းအရာနှင့်မဆိုဆက်စပ်သည့် မက်တာဒေတာများပါပါဝင်သည်။ (တုံ့ပြန်ချက်မှလွဲ၍၊ အပိုင်း ၉ တွင်အဓိပ္ပါယ်ဖွင့်ဆိုထားသည်) အသုံးပြုသူအကြောင်းအရာအားလုံးကို လျှို့ဝှက်ချက်မဟုတ်သော၊ တစ်ဦးတည်းပိုင်မဟုတ်သောအရာအဖြစ် သတ်မှတ်သည်။ သင်သည် အသုံးပြုသူအကြောင်းအရာများ တင်ခြင်း၊ ဒေါင်းလုပ်လုပ်ခြင်း၊ ဖော်ပြခြင်း၊ အီးမေးလ်ပို့ခြင်း၊ ထုတ်လွှင့်ခြင်း၊ သိမ်းဆည်းခြင်း (သို့) သင်မှဖြစ်စေ၊ သင့်အကောင့်မှဖြစ်စေပြုလုပ်ခြင်းတို့အတွက် လုံးဝတာဝန်ရှိသည်။ HTC သည် ဆိုက်ကိုသုံး၍တင်သော (သို့) ထုတ်လွှင့်သောအသုံးပြုသူအကြောင်းအရာများကို ထိန်းချုပ်ခြင်းမလုပ်ပါ။ အသုံးပြုသူအကြောင်းအရာများ၏ တိကျမှု၊ ဂုဏ်သိက္ခာ (သို့) အရည်အသွေးကိုလည်း အာမခံမည်မဟုတ်ပါ။ HTC သည် အသုံးပြုသူအကြောင်းအရာများကို ကြိုတင်တည်းဖြတ်ခြင်းမလုပ်သော်လည်း အသုံးပြုသူအကြောင်းအရာတို့သည် သင့်တော်မှုရှိမရှိ၊ သက်ဆိုင်ရာသတ်မှတ်ချက်များနှင့်ကိုက်ညီမှုရှိမရှိ ဆုံးဖြတ်ပိုင်ခွင့်ရှိသည်။ ကြိုတင်အသိပေးခြင်းမပြုလုပ်ပဲ ကိုယ်ပိုင်ဆုံးဖြတ်ခွင့်ဖြင့် အသုံးပြုသူအကြောင်းအရာများကို မည်သည့်အချိန်တွင်မဆို ကြိုတင်တည်းဖြတ်ခြင်း၊ စစ်ထုတ်ခြင်း၊ ကန့်သတ်ခြင်း၊ ပိတ်ပင်ခြင်း၊ ရွှေ့ပြောင်းခြင်း၊ ငြင်းဆိုခြင်း၊ ပြင်ဆင်ခြင်း (သို့) ဖျက်ပစ်ခြင်းများ ပြုလုပ်နိုင်သည်။ HTC သည် မည်သည့်အသုံးပြုသူအကြောင်းအရာအတွက်မဆို တာဝန်ရှိမည်မဟုတ်ပါ။ HTC သည် ဆိုက် (သို့) ၀န်ဆောင်မှုတစ်ခုကိုသုံး၍ ထုတ်လွှတ်သော (သို့) သိမ်းဆည်းသော မည်သည့်အသုံးပြုသူအကြောင်းအရာ၏ လုံခြုံမှု (သို့) ရရှိနိုင်မှုကိုမျှ အာမမခံပါ။ ဆိုက် (သို့) ၀န်ဆောင်မှုတစ်ခုအားသုံးခြင်း (သို့) ၀င်ရောက်ခြင်းအား စောင့်ကြည့်လိမ့်မည်ဆိုသော ဖော်ပြချက်များလည်းမပြုလုပ်ပါ။ HTC မှသင့်အား အရေးကြီးသောကိုယ်ရေးအချက်အလက်များကို တင်ခြင်း (သို့) မျှဝေခြင်းမလုပ်ရန် တောင်းဆိုပါသည်။
အသုံးပြုသူအကြောင်းအရာအတွက်လိုင်စင် HTC မှနေ၍ သင်တင်သော (သို့) ဆိုက်ဖြစ်စေ၊ ဆက်နွယ်နေသောဝန်ဆောင်မှုဖြစ်စေ သုံး၍ပြုလုပ်သော အသုံးပြုသူအကြောင်းအရာများအတွက် ပိုင်ဆိုင်မှုကို မတောင်းဆိုပါ။ သို့သော် အသုံးပြုသူအကြောင်းအရာ (သို့/နှင့်) ကိုယ်ဖြစ်ကြောင်းသက်သေပြနိုင်သောအချက်အလက်များကို အခြားအသုံးပြုသူများ (သို့) အများပြည်သူ ၀င်ရောက်နိုင်သောဆိုက်တွင် တင်ခြင်း၊ ဖော်ပြခြင်း (သို့) ထုတ်လွှတ်ခြင်းအားဖြင့် သင်သည် HTC နှင့် ထိုအသုံးပြုသူအကြောင်းအရာများကိုဝင်ရောက်နိုင်သော တစ်ကမ္ဘာလုံးရှိအများပြည်သူသို့ မူမိုင်ခကင်းခြင်း၊ အသုံးပြုရန်အကြွင်းမဲ့လိုင်စင်ပေးခြင်း၊ ထုတ်လွှတ်ခြင်း၊ ဖြန့်ဝေခြင်း၊ ပြန်လည်ထုတ်လုပ်ခြင်း၊ ပြင်ဆင်ခြင်း၊ လိုက်ဖက်အောင်ပြင်ဆင်ခြင်း၊ တတိယပုဂ္ဂိုလ်သို့ထုတ်ဖော်ခြင်း၊ ပုံနှိပ်ထုတ်ဝေခြင်း၊ ဘာသာပြန်ခြင်း၊ လူသိရှင်ကြားလုပ်ဆောင်ခြင်းနှင့်ပြသခြင်း၊ ထိုအသုံးပြုသူအကြောင်းအရာနှင့်ဆက်စပ်၍ သင့်အမည်နှင့် သင်ဖြစ်ကြောင်းသက်သေပြနိုင်သည့်အချက်အလက်များကို ပုံနှိပ်ထုတ်ဝေခြင်းများအတွက် သင့်ဘက်မှခွင့်ပြုရမည်။ HTC သည် သင့်၏သက်သေခံအချက်အလက်များကို (သိခဲ့ပါက) တတိယပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးဦးမှနေ၍ ဆိုက်သို့သင်တင်သောအရာများသည် ၄င်းတို့၏ဥာဏ်ပညာဖြင့်တီထွင်ဖန်းတီးမှု၏အခွင့်အရေးကို ချိုးဖောက်သည် (သို့) ၄င်းတို့၏လုံခြုံမှုအခွင့်အရေးကို ချိုးဖောက်သည်ဟု တောင်းဆိုလာပါက ထုတ်ဖော်ပေးနိုင်သည်။ အသုံးပြုသူအကြောင်းအရာများကို အခြားအသုံးပြုသူများ (သို့) အများပြည်သူ ၀င်ရောက်နိုင်သောဆိုက်တွင် တင်ခြင်း၊ ဖော်ပြခြင်း (သို့) ထုတ်လွှတ်ခြင်းအားဖြင့် သင်သည် ယင်းအသုံးပြုသူအကြောင်းအရာ၏ပိုင်ရှင်ဖြစ်သည် (သို့) ၄င်းအားဖြန့်ဝေရန်သင့်တွင်အခွင့်အာဏာရှိခြင်းနှင့် ထိုအသုံးပြုသူအကြောင်းအရာအား သုံးခြင်းနှင့်ပုံနှိပ်ဖြန့်ဝေခြင်း (သက်ဆိုင်ရာလုံခြုံမှုဥပဒေအရလိုအပ်သော သဘောတူညီချက်များအားလုံးအပါအ၀င်) သည် မည်သည့်ဥပဒေကိုမျှချိုးဖောက်ရာမရောက်ဟု သင့်ဘက်မှ ကိုယ်စားပြု၊ အာမခံပြီးဖြစ်သည်။ ဆိုက်နှင့် ဆက်နွယ်နေသောမည်သည့်ဝန်ဆောင်မှုကိုမဆို ပံ့ပိုးပေးရန်နှင့် သင့်အသုံးပြုသူအကြောင်းအရာကို ၄င်းအပေါ်တွင်ရနိုင်စေရန်အတွက် HTC သည် သင့်၏အသုံးပြုသူအကြောင်းအရာအား အမျိုးမျိုးသောအများပြည်သူနက်ဝက်များနှင့် မီဒီယာများသို့ ထုတ်လွှတ်နိုင်သည်၊ သင့်အသုံးပြုသူအကြောင်းအရာအား ပြန်လည်ထုတ်လုပ်ခြင်း၊ ပြင်ဆင်ခြင်း (သို့) ပြောင်းလဲခြင်းများလည်းပြုလုပ်နိုင်သည်။ HTC သည်အသုံးပြုသူအကြောင်းအရာကို သိမ်းဆည်းခြင်း၊ ပြန်လည်ရယူခြင်းလည်းပြုလုပ်နိုင်သည်။ အသုံးပြုသူများနှင့် အများပြည်သူတို့မြင်နိုင်အောင်လုပ်ခြင်း၊ ဆိုက်လည်ပတ်ခြင်းနှင့်ဆက်စပ်ပြီး နည်းပညာဆိုင်ရာလိုအပ်ချက်များနှင့်ကိုက်ညီရန် ပြင်ဆင်ခြင်းတို့လည်းပြုလုပ်နိုင်သည်ဟု သင်နားလည်ထားရမည်။ HTC သည် သင် (သို့) ဆိုက်၏မည်သည့်အသုံးပြုသူမဆိုတင်ထားသော မည်သည့်အကြောင်းအရာ၏ ပါဝင်မှုများနှင့်တိကျမှုများအတွက်ကိုမဆို တာဝန်မရှိပါ၊ မည်သည့်တတိယပုဂ္ဂိုလ်အတွက်မျှ တာဝန်မရှိပါ။ HTC သည် ဆိုက်ပေါ်တွင်တင်သော မည်သည့်အကြောင်းအရာအတွက်ကိုမဆို လုပ်ဆောင်မှုဆိုင်ရာစည်းမျဉ်းများနှင့်မကိုက်ညီခြင်းအပါအ၀င် မည်သည့်အကြောင်းကြောင့်ဖြစ်စေ ဖျက်ရန်အခွင့်အရေးရှိသည်။
တုံ့ပြန်ချက် သင်သည် HTC သို့ ထုတ်ကုန်ပစ္စည်းများနှင့်ဝန်ဆောင်မှုများတိုးတက်ရန် အကြံပေးခြင်း (“တုံ့ပြန်ချက်”) ပြုလုပ်ပါက ထိုသို့အကြံပေးခြင်းအားဖြင့် သက်ဆိုင်ရာဥပဒေကခွင့်ပြုထားသည့်အတိုင်းအတာအထိ သင်သည် HTC အား တုံ့ပြန်ချက်တွင် အခွင့်အရေးအားလုံး၊ ခေါင်းစဉ်၊ တစ်ကမ္ဘာလုံး၏စိတ်ဝင်စားမှုများအတွက် HTC မှ မည်သည့်နစ်နာကြေး (သို့) မူပိုင်ကြေးမှမတောင်းခံပဲ ယတိပြတ်ထိထိရောက်ရောက် ခွင့်ပြုလိုက်ပြီးဖြစ်ကြောင်း သင်သဘောတူရမည်။ တုံ့ပြန်ချက်တွင်သင့်ဘက်မှရှိနိုင်သော မည်သည့်ကျင့်ဝတ်ဆိုင်ရာအခွင့်အရေးကိုမဆို လျှော့ပေါ့ပေးရမည်။ ထို့အပြင် HTC ထံသင်ပေးသောတုံ့ပြန်ချက်နှင့်ပတ်သက်ပြီး HTC နှင့် HTC ၏ဆက်ခံသူများအား မည်သည့်တောင်းဆိုချက်မှမလုပ်ပါဟု ထိထိရောက်ရောက်၊ ယတိပြတ် သင့်ဘက်မှလျှော့ပေါ့ကာ၊ သဘောတူရမည်။ သင့်ဘက်မှ မည်သည့်လုပ်ဆောင်ချက် (သို့) မည်သည့်စာရွက်စာတမ်းမျှထပ်မံမလိုအပ်ပဲ ဤတာဝန်နှင့်လျှော့ပေါ့မှုသည် သက်ရောက်မှုရှိလိမ့်မည်ဟုလည်း သဘောတူရမည်။
HTC အကြောင်းအရာ၊ တစ်ဦးတည်းပိုင်အခွင့်အရေး၊ လိုင်စင်၊ အသစ်များ . “HTC အကြောင်းအရာဆိုသည်မှာ HTC နှင့် ၄င်း၏လိုင်စင်ခွင့်ပြုသူများမှ ဆိုက်နှင့်ဆက်နွယ်ပြီး သင့်အားပေးသော သတင်းအချက်အလက်များအားလုံး၊ ဂရက်ဖစ်၊ စာသား၊ ဓါတ်ပုံများ၊ ဆော့ဖ်ဝဲလ်၊ အသံဖိုင်များ၊ ဗီဒီယို၊ ဆက်သွယ်ရေးနှင့်အခြားအရာများ (မည်သည့်အကြောင်းအရာနှင့်မဆိုဆက်စပ်သည့် မက်တာဒေတာများအပါအ၀င်) ကိုဆိုလိုသည်။ HTC နှင့် ၄င်း၏လိုင်စင်ခွင့်ပြုသူများသည် HTC အကြောင်းအရာများရွေးချယ်ခြင်းနှင့်စီစဉ်ခြင်း၊ ဆိုက်၏အသွင်နှင့်ထိတွေ့ခံစားမှုတို့အပါအ၀င် HTC အကြောင်းအရာအားလုံးကိုပိုင်ဆိုင်သည်။ HTC နှင့် ၄င်း၏လိုင်စင်ခွင့်ပြုသူများသည် သင့်၏ဆိုက်အားအသုံးပြုခြင်းတစ်စိတ်တစ်ဒေသ (သို့) ဆိုက်အသုံးပြုခြင်းနှင့်ဆက်နွယ်ပြီး (“ဆော့ဖ်ဝဲလ်”) သင့်အားပေးသော ဆိုက်၊ HTC အကြောင်းအရာ၊ ဆော့ဖ်ဝဲလ်တစ်ခုခု (အသစ်များနှင့်အသစ်နှင့်အတူပူးတွဲနေသောအရာများအပါအ၀င်) နှင့်ပတ်သက်သည့် ဥပဒေဆိုင်ရာအခွင့်အရေး၊ ခေါင်းစဉ်နှင့် ရပိုင်ခွင့်အားလုံးကိုပိုင်ဆိုင်သည်။ HTC သည် ၀န်ဆောင်မှု၏တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းအဖြစ်၊ သတ်မှတ်ချက်များနှင့်အညီ HTC မှ သင့်အားပေးသောဆော့ဖ်ဝဲလ်ကိုသုံးရန် တစ်ကိုယ်ရေဖြစ်သော၊ တစ်ဦးတည်းပိုင်မဟုတ်သော၊ လွှဲပြောင်းမရသော၊ အကန့်အသတ်ရှိလိုင်စင်ကို သင့်အားပေးမည်။ HTC သည် အခါအားလျော်စွာ ဆောဖ်ဝဲလ်အတွက် အသစ်များသင့်ထံပို့ပေးမည်၊ ၄င်းအား သင့်ဖုန်းတွင် အလိုအလျောက်ဒေါင်းလုပ်လုပ်ကာ ထည့်သွင်းနိုင်သည်။ ထိုအသစ်များတွင် ဘတ်ဂ်ပြင်ဆင်ခြင်းများ၊ လုပ်ငန်းဆောင်တာမြှင့်တင်မှုများ၊ တိုးတက်မှုများ (သို့) ဆော့ဖ်ဝဲလ်၏ပုံစံအသစ်တို့ပါဝင်နိုင်သည်။ HTC မှအလိုအလျောက် ထိုအသစ်များကို သင့်ထံပေးပို့ပြီး၊ သင်လက်ခံရယူကာ သင့်ဖုန်းပေါ်တွင်လိုသလိုထည့်သွင်းမည်ဟု သင်သဘောတူရမည်။
အာမခံချက်များမရှိခြင်း ဆိုက်၊ လင့်ခ်လုပ်ထားသောဆိုက်များ၊ အကြောင်းအရာ၊ တတိယပုဂ္ဂိုလ်၏အရာများနှင့် ၀န်ဆောင်မှုများ (အကန့်အသတ်မဲ့၊ ဆိုက်မှတဆင့် သင့် HTC ဖုန်းပေါ်သို့ဒေါင်းလုပ်လုပ်ထားသော HTC ဖုန်းပေါ်တွင်ထည့်သွင်းထားသည့်ဆော့ဖ်ဝဲလ်အတွက် အသစ်ပြောင်းခြင်းနှင့်အဆင့်မြင့်ခြင်းတို့အပါအ၀င်) ကို AS IS, WITH ALL FAULTS နှင့် "AS AVAILABLE" အဖြစ်ပေးထားသည်။ ကျေနပ်ဖွယ်အရည်အသွေး၊ လုပ်ဆောင်မှု၊ ရရှိနိုင်မှု၊ လုံခြုံမှု၊ တိကျမှု နှင့် အားထုတ်မှုတို့ပတ်သက်သော အန္တရာယ်တစ်ခုလုံးသည် သက်ဆိုင်ရာဥပဒေမှခွင့်ပြုထားသည့် အမြင့်ဆုံးအတိုင်းအတာအထိ သင့်နှင့်အတူရှိနေမည်။ HTC နှင့် ၄င်း၏ပစ္စည်းတင်သွင်းသူများသည် ထွက်ဆိုချက်များ၊ အာမခံခြင်းများ (သို့) အခြေအနေများ၊ ဖော်ပြခြင်း၊ ညွှန်းဆိုခြင်း (သို့) ပြဋ္ဌာန်းဥပဒေအရ၊ အကန့်အသတ်မဲ့အပါအ၀င်၊ ကုန်သွယ်မှု၏ညွှန်းဆိုထားသောအာမခံခြင်းများ၊ ကုန်သွယ်နိုင်သော (သို့) ကျေနပ်ဖွယ်အရည်အသွေး၊ အကြောင်းတစ်ခု၊ ခေါင်းစဉ် (သို့) ချိုးဖောက်မှုမဟုတ်ခြင်းအတွက် သင့်တော်ခြင်း၊ အထူးသဖြင့် HTC၊ ၄င်း၏ပစ္စည်းတင်သွင်းသူများနှင့် လိုင်စင်ခွင့်ပြုသူများသည် (၁) ဆိုက် (သို့) ၀န်ဆောင်မှုများသည် သင့်လိုအပ်ချက်များနှင့်ကိုက်ညီစေရမည်။ (၂) ဆိုက် (သို့) ၀န်ဆောင်မှုများကို မပြတ်မတောက်၊ အချိန်မှန်၊ လုံခြုံမှုရှိ၍ အမှားအယွင်းကင်းစင်စွာတင်ဆက်ထားသည်။ (၃) ဆိုက် (သို့) ၀န်ဆောင်မှုများကိုသုံးခြင်းဖြင့် သင်ရယူသော မည်သည့်သတင်းအချက်အလက်မဆို တိကျမှန်ကန်၍ ယုံကြည်နိုင်လောက်သည်။ (၄) ဆိုက်မှတဆင့် သင့်အားပေးသော မည်သည့်ဆော့ဖ်ဝဲလ်တွင်မဆိုရှိသော အနာအဆာနှင့်အမှားအယွင်းများကို ပြုပြင်ပေးမည်ဟု အာမမခံပါ။ HTC သည် ဖြန့်ဝေထားသော ၀န်ဆောင်မှုငြင်းဆန်သည့်တိုက်ခိုက်မှု၊ ဗိုင်းရပ်စ် (သို့) သင့်ကွန်ပျူတာ၊ ကိရိယာ၊ ကွန်ပျူတာပရိုဂရမ်များကို အန္တရာယ်ဖြစ်စေနိုင်သော အခြားနည်းပညာဆိုင်ရာအန္တရာယ်ရှိသည့်အရာများ၊ ဆိုက်ကိုသုံးခြင်း (သို့) ဆိုက်ပေါ်ရှိ (သို့) လင့်ခ်လုပ်ထားသောဝက်ဘ်ဆိုက်များမှ မည်သည့်အရာကိုမဆိုဒေါင်းလုပ်လုပ်ခြင်းကြောင့် ဒေတာ (သို့) အခြားတစ်ဦးတည်းပိုင်အရာများ ပျောက်ဆုံးခြင်း (သို့) ပျက်စီးခြင်းအတွက် တာဝန်မယူပါ။ ဆိုက်မှ သင်ဒေါင်းလုပ်လုပ်ပြီးရယူထားသော အရာအားလုံးအတွက် မိမိဘာသာတာဝန်ယူရမည်။ ဒေါင်းလုပ်လုပ်ခြင်းကြောင့် သင့်ဖုန်းပျက်ခြင်း (သို့) ဒေတာ၊ အကြောင်းအရာများပျောက်ဆုံးခြင်းတို့အတွက် သင့်တာဝန်သာဖြစ်သည်။ HTC သည် ဆိုက် (သို့) မည်သည့်လုပ်ဆောင်မှုတစ်ခုခုကိုမဆို ရရှိနိုင်ပြီး နေရာတစ်ခုတွင်အသုံးပြုရန်သင့်တော်သည်ဟု ကြေငြာခြင်း (သို့) အာမခံခြင်းမပြုပါ။ ဆိုက်ကိုဝင်ရောက်၊ သုံးစွဲခြင်းနှင့်ပတ်သက်ပြီး သက်ဆိုင်ရာဥပဒေများအားလုံးကိုလိုက်နာရန် သင့်တွင်တာဝန်ရှိသည်။ ထိုသတ်မှတ်ချက်များပြောင်းလဲမရနိုင်ဆိုသော သင့်၏၀ယ်ယူသူထပ်ဆောင်းအခွင့်အရေးသည် ဒေသဆိုင်ရာဥပဒေများအောက်တွင် ရှိနိုင်သည်။ အထူးသဖြင့် ဒေသဆိုင်ရာဥပဒေမှ ချန်လှပ်ထား၍မရသော ပြဋ္ဌာန်းသတ်မှတ်ချက်များကို ညွှန်းဆိုသည့် အတိုင်းအတာအထိ ထိုသတ်မှတ်ချက်များသည် ဤစာရွက်စာတမ်းတွင်ပါဝင်သည်ဟုမှတ်ယူသည်။ သို့သော် အဆိုပါပြဋ္ဌာန်းညွှန်းဆိုထားသည့် သတ်မှတ်ချက်များအားချိုးဖောက်ခြင်းအတွက် HTC ၏တာဝန်ယူမှုသည် သက်ဆိုင်ရာဥပဒေမှခွင့်ပြုထားသည့်အတိုင်းအတာ (သို့) ထိုဥပဒေနှင့်အညီ အကန့်အသတ်ရှိသည်။
အချို့အပျက်အစီးများအတွက် မသက်ဆိုင်ကြောင်းငြင်းဆိုခြင်း ဥပဒေအရခွင့်ပြုထားသည့် အမြင့်ဆုံးအတိုင်းအတာအထိ HTC (သို့) ပစ္စည်းတင်သွင်းသူများသည် (က) လင်ငင်းအကျိုးဖြစ်သော၊ ထူးခြားသော၊ မတော်တဆဖြစ်သော၊ တိုက်ရိုက်မဟုတ်သော (သို့) ပြင်းထန်းသော မည်သည့်ပျက်စီးခြင်းကိုမဆို၊ (ခ) အကျိုးအမြတ် (သို့) လျှို့ဝှက်သော (သို့) အခြားသတင်းအချက်အလက်များ ဆုံးရှုံးရခြင်းအတွက်၊ စီးပွားရေးအနှောင့်အယှက်ဖြစ်ခြင်းအတွက်၊ ကိုယ်ခန္ဓာထိခိုက်ဒဏ်ရာရခြင်း၊ ပိုင်ဆိုင်ပစ္စည်းပျက်စီးခြင်းအတွက်၊ လုံခြုံမှုပျောက်ဆုံးခြင်းအတွက်၊ ယုံကြည်မှုနှင့်စောင့်ရှောက်မှု၏တာဝန်ပျက်ကွက်ခြင်းအတွက် (သို့) လစ်လျူရှုခြင်းအတွက် (က) နှင့် (ခ) တွင် အဆိုပါသတ်မှတ်ချက်များ၊ ဆိုက်နှင့် ဆိုက်အားအသုံးပြုခြင်း၊ လင့်ခ်လုပ်ထားသောဆိုက်များ၊ HTC အကြောင်းအရာများ၊ တတိယပုဂ္ဂိုလ်၏အရာများ (သို့) ၀န်ဆောင်မှုများနှင့်ဆက်နွယ်ပြီးဖြစ်ပေါ်လာပါက HTC (သို့) မည်သည့်ပစ္စည်းတင်သွင်းသူမဆို ထိုအပျက်အစီးများအတွက်ဖြစ်နိုင်ချေအားအသိပေးထားပြီးဖြစ်လျှင်တောင် တာဝန်ယူခြင်းမပြုပါ။ အချို့တရားစီရင်မှုများတွင် မတော်တဆ (သို့) လင်ငင်းအကျိုးကြောင့်ဖြစ်သောပျက်စီးမှုများ (သို့) ကိုယ်ခန္ဓာထိခိုက်ဒဏ်ရာရခြင်းကြောင့်ဖြစ်သောပျက်စီးမှုများအတွက် ပယ်ခြင်း (သို့) ကန့်သတ်ခြင်းကိုခွင့်မပြုပါ။ ထိုကြောင့် အထက်ပါ ပျက်စီးခြင်းများအတွက် ကန့်သတ်ခြင်း (သို့) ဖယ်ရှားခြင်းတို့သည် သင်နှင့်မသက်ဆိုင်ပါ။
တာဝန်ဝတ္တရားကန့်သတ်ချက်နှင့် တစ်ခုတည်းသောကုစားခြင်း သက်ဆိုင်ရာဥပဒေမှခွင့်ပြုထားသော အမြင့်ဆုံးအတိုင်းအတာအထိ HTC နှင့် ၄င်းပစ္စည်းတင်သွင်းသူများက သင့်အတွက် အမြင့်ဆုံးတာဝန်ယူနိုင်မှုနှင့် ပျက်စီးခြင်းများအားလုံး၊ ထိခိုက်မှု၊ ပိုင်ဆိုင်ပစ္စည်းပျက်စီးမှုနှင့်ဆုံးရှုံးမှုများ၊ အဆိုပါသတ်မှတ်ချက်များ၊ ဆိုက်နှင့် ဆိုက်အားအသုံးပြုခြင်း၊ လင့်ခ်လုပ်ထားသောဆိုက်များ၊ HTC အကြောင်းအရာများ၊ တတိယပုဂ္ဂိုလ်၏အရာများ (သို့) ၀န်ဆောင်မှုများနှင့်ဆက်နွယ်ပြီးဖြစ်ပေါ်လာပါက သင်ကုန်ကျသောအမှန်တကယ်ပျက်စီးမှုများအတွက် သင့်၏တစ်ခုတည်းသောကုစားခြင်းသည် ငါးဒေါ်လာ (U.S. $ ၅.၀၀) အထိခံစားခွင့်ရှိသည်။ ထိုသတ်မှတ်ချက်များ၊ ဆိုက်၊ လင့်ခ်လုပ်ထားသောဆိုက်များ၊ အကြောင်းအရာ၊ တတိယပုဂ္ဂိုလ်၏အရာများ (သို့) ၀န်ဆောင်မှုတို့နှင့်ပတ်သက်သည့် မြောက်များစွာသောတောင်းဆိုမှုများရှိခြင်းကို ငွေကြေးပျက်စီးခြင်းကန့်သတ်ချက်ထက် မကျော်လွန်စေပါ။ သက်ဆိုင်ရာဥပဒေမှခွင့်ပြုထားသော အမြင့်ဆုံးအတိုင်းအတာအထိ ထိုတကယ့်ငွေကြေးပျက်စီးမှုများသည် သင့်၏ကုစားမှုပင်ဖြစ်မည်။
အချို့တရားစီရင်မှုများတွင် အချို့သောစာချုပ်သတ်မှတ်ချက်များကို ခွင့်မပြုပါ။ အကယ်တရားစီရင်ခွင့်အာဏာရှိသောတရားရုံးသည် အထက်ပါတာဝန်ကို ပြဋ္ဌာန်းမရဟုယူဆပါက
ထိခိုက်နစ်နာမှုအတွက်အာမခံ သင့်တင့်လျော်ကန်သော ရှေ့နေများ၊ အခကြေးငွေများ၊ (က) ဆိုက်(သို့) ဝန်ဆောင်မှုတခုကိုအသုံးပြုပြီး အသုံးပြုသူအကြောင်းအရာကို တင်ခြင်း၊ ဖော်ပြခြင်း၊ ထုတ်လွှတ်ခြင်း (သို့) သင့်အကောင့်ထဲတွင် တခုခုပြုလုပ်ခြင်း၊ (ခ) သင့်အကောင့် သတင်းအချက်အလက်ကို အသုံးပြုပြီးဆိုက် (သို့) ဝန်ဆောင်မှု ကိုအသုံးပြုမှုနှင့် ဖြစ်ပေါ်သည့် လှုပ်ရှားမှုများ၊ (ဂ) သင့်ကြောင့် သတ်မှတ်ချက်များအားချိုးဖောက်မှုတခုခု၊ (ဃ) တတိယပုဂ္ဂိုလ်၏ အခွင့်အရေးများအား သင်ချိုးဖောက်မှုတို့နှင့် ဆက်စပ်သော (သို့) ဖြစ်ပေါ်လာသော တတိယပုဂ္ဂိုလ်၏ အခွင့်အရေးတောင်းဆိုခြင်း (သို့) တောင်းခံခြင်းတခုခုမှ အန္တရာယ်မရှိပဲ သင်သည် HTC၊ ၄င်း၏ဒါရိုက်တာများ၊ အုပ်ချုပ်သူအရာရှိများ၊ အလုပ်သမားများ၊ ကိုယ်စားလှယ်များ၊ ပါတနာများ၊ ပစ္စည်းတင်သွင်းသူများ၊ လိုင်စင်ခွင့်ပြုသူများအား ခုခံပြောဆို၊ လျော်ကြေးပေး၊ လက်ကိုင်ထားနိုင်သည်။
လွတ်လပ်သော ကုစားခြင်းများ အပိုင်း၁၂တွင် ပါဝင်သော ပျက်စီးမှုများအတွက် ပယ်ခြင်းသည် အပိုင်း၁၃တွင် လွတ်လပ်သော သင်၏သီးသန့်ကုစားခြင်းများဖြစ်ပြီး အကယ်၍သီးသန့်ကုစားခြင်းများသည် ၄င်း၏မရှိမဖြစ် ရည်ရွယ်ချက်ကြောင် မအောင်မြင်လျှင်သော်မှ ၄င်းဆက်လက်ရှင်သန်မည်။ (သို့) ထိုကဲ့သို့မဟုတ်ပါက ၄င်းသည် မခိုင်ခံ့ဟု ယူဆမည်။ ပျက်စီးခြင်းများသည် (က) သဘောတူမှုဖောက်ဖျက်ခြင်း၊ (ခ) ကတိစာချုပ်ဖောက်ဖျက်ခြင်း၊ (ဂ) အမှား (သို့) နစ်နာချက်၊ လစ်လျူရှုမှုနှင့် မှားယွင်းဖော်ပြမှုအပါအ၀င်၊ (ဃ) တင်းကြပ်သောတာဝန်မကင်းမှု (သို့) (င) အရေးယူခြင်းကြောင့်ဖြစ်ပွားမှု တို့အပေါ်တွင် ဖြစ်ပွားသည်ကို ဂရုမထားပဲ အပိုင်း၁၂နှင့်၁၃တွင် တာဝန်မကင်းခြင်း ကန့်သတ်ချက်များတခုစီကို အသုံးချမည်။ အသုံးချဥပဒေသည် ပယ်ခြင်းများ၊ ကန့်သတ်ချက်များကို တိုးချဲ့ရန် မတားမြစ်ထားပါ။
မူပိုင်ခွင့်အသိပေးချက်နှင့် အရေးယူခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်များ သင်သည် HTC နှင့် တတိယပုဂ္ဂိုလ်တို့၏ ဥာဏ်ပညာဖြင့် တီထွင်ဖန်းတီးထားမှုနှင့်သက်ဆိုင်သော ပိုင်ဆိုင်ခွင့်များကို လိုက်နာရန် သဘောတူရမည်။ အကယ်၍ဆိုက်တွင်ရှိနေသောအရာများသည် တတိယပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးဦး၏ မူပိုင်ခွင့်ကို ကျူးကျော်ဖောက်ဖျက်သည်ဟု သင်ယုံကြည်ပါက မူပိုင်ခွင့် & ဥာဏ်ပညာဖြင့်တီထွင်ဖန်းတီးထားမှုနှင့်သက်ဆိုင်သော ပိုင်ဆိုင်မှု တွင်ဖော်ပြထားသော သတိပေးစာအစီအစဉ်ကို အသုံးပြု၍ HTC ၏ မူပိုင်ခွင့်ကိုယ်စားလှယ်သို့ အကြောင်းကြားပါ။ သတိပေးစာကိုရရှိပြီးနောက် HTC သည် ဤကျူးကျော်ဖောက်ဖျက်သည့်အကြောင်းအရာကို ဖယ်ရှားမည် (သို့) အသုံးပြုမှုပိတ်မည် ဖြစ်သည်။ HTC သည် HTC ၏ (သို့) အခြား၏အခွင့်အရေးများကို ကျူးကျော်ဖောက်ဖျက်ခြင်းအတွက် အကောင့်ပိုင်ရှင် (သို့) ဆိုက်ကို အသုံးပြုသူအား မည်သည့်အကောင့်ကိုမဆို (သို့) ဆိုက်ကို အသုံးပြုနိုင်ခွင့်ကို အဆုံးသတ်နိုင်ခွင့်ရှိသည်။
သက်ဆိုင်သောဥပဒေနှင့်ဖိုရမ် ဆန့်ကျင်လျက်ရှိသော ဥပဒေနှင့်ဖိုရမ်များကို အရေးမထားပဲအကယ်၍ သင်သည် (က) မြောက်အမေရိက၊ လက်တင်အမေရိကတွင် နေထိုင်ပါက ဝါရှင်တန်ပြည်နယ်၏ ဥပဒေများသည် ဤသတ်မှတ်ချက်များ၊ အဓိပ္ပါယ်ပြန်ဆိုချက်များနှင့် သတ်မှတ်ချက်ချိုးဖောက်ခြင်းအတွက် တောင်းဆိုချက်များအပေါ် လွှမ်းမိုးသည်။ (ခ) အခြားဒေသတခုခုတွင်နေပါက ထိုင်ဝမ်၏ဥပဒေများသည် ဤသတ်မှတ်ချက်များ၊ အဓိပ္ပါယ်ပြန်ဆိုချက်များနှင့် သတ်မှတ်ချက်ချိုးဖောက်ခြင်းအတွက် တောင်းဆိုချက်များအပေါ် လွှမ်းမိုးသည်။ အခြားတောင်းဆိုချက်များအားလုံးဖြစ်သော သုံးစွဲသူကို ကာကွယ်ပေးသော ဥပဒေနှင့် သက်ဆိုင်သော တောင်းဆိုချက်များ အပါအဝင်၊ မမျှတသော အပြိုင်ဥပဒများ၊ နစ်နာချက်များအပေါ် အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုရှိ သင်နေထိုင်ရာ ပြည်နယ်၏ ဥပဒေများက လွှမ်းမိုးမည်။ အကယ်၍သင်သည် အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုတွင်မဟုတ်ပဲ အခြားတွင်နေထိုင်ပါက သင်၏ဝန်ဆောင်မှုကို ညွှန်ကြားသောနိုင်ငံ၏ ဥပဒေများက လွှမ်းမိုးမည်။ သင်သည် မြောက်အမေရိက၊ လက်တင်အမေရိကတွင် နေထိုင်ပါက ဝန်ဆောင်မှု (သို့) သတ်မှတ်ချက်များနှင့်ဆက်စပ်ပြီးဖြစ်ပေါ်နိုင်သည့် ကွဲလွဲချက်များ၊ တောင်းဆိုချက်များ၊ လုပ်ဆောင်ချက်များ တခုခု (သို့) အားလုံးအတွက် သင်နှင့် HTC သည် ဝါရှင်တန်မှ အဖွဲ့အစည်း၊ ရုံးများသို့ သီးခြားတရားစီရင်ပိုင်ခွင့် တောင်းဆိုရမည်။ အခြားဒေသတခုခုတွင်နေပါက ဝန်ဆောင်မှု (သို့) သတ်မှတ်ချက်များနှင့်ဆက်စပ်ပြီးဖြစ်ပေါ်နိုင်သည့် ကွဲလွဲချက်များ၊ တောင်းဆိုချက်များ၊ လုပ်ဆောင်ချက်များ တစ်ခုခု (သို့) အားလုံးအတွက် သင်နှင့် HTC သည် တိုင်ပေခရိုင်ရုံးသို့ သီးခြားတရားစီရင်ပိုင်ခွင့် တောင်းဆိုရမည်။ အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ ကုန်ပစ္စည်းရောင်းခြင်းတွင် UN သည် သတ်မှတ်ချက်များကို အသုံးချခြင်းတွင် မပါဝင်ပါ။ သင်သည် U.S. (သို့) အခြားနိုင်ငံတခုခု၏ တင်ပို့မှုဆိုင်ရာ ဥပဒေများနှင့် လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများ (သို့) သတ်မှတ်ချက်များကို ဖောက်ဖျက်စေနိုင်သောဆိုက်မှ မည်သည့်အရာ (သို့) ဝန်ဆောင်မှု(ဆော့ဖ်ဝဲလ်အပါအဝင်) ကိုမှ အသုံးပြုခွင့် (သို့) တင်ပို့ခွင့် မရှိပါ။ သင့်လျော်သော ဥပဒေဖြင့် အောက်ဖော်ပြပါကန်သတ်ချက်ကို မပိတ်ပင်ထားပါက တောင်းဆိုချက် (သို့) သတ်မှတ်ချက်များနှင့်ပတ်သက်၍ ဆောင်ရွက်မှု (သို့) ဆိုက်ကိုအသုံးပြုမှု (သို့) ဝန်ဆောင်မှု ကြောင့် မည်သည့်ဖြစ်ပွားမှုကိုမဆို ဖြစ်ပွားပြီး (သို့) တားဆီးပြီး တစ်နှစ်အတွင်း ဖိုင်ဖြင့် သိမ်းဆည်းထားခြင်းခံရမည်။
ဤသတ်မှတ်ချက်များအားပြောင်းလဲခြင်း HTC သည် ဤသတ်မှတ်ချက်များအား အချိန်မရွေး ပြောင်းလဲခွင့်ရှိသည်။ အသစ်ပြောင်းလဲခြင်းသည် ညွှန်ပြထားခြင်းမရှိလျှင် ဤသတ်မှတ်ချက်များတင်ထားသောရက်စွဲတွင် ဖော်ပြထားသည့်အတိုင်းဖြစ်ပြီး ညွှန်ပြထားခြင်းရှိပါက အသစ်ပြောင်းလဲထားသော သတ်မှတ်ချက်များအတိုင်းဖြစ်သည်။ သင်သည် လက်ရှိ သတ်မှတ်ချက်များကို အချိန်မရွေး တွင် ကြည့်နိုင်သည်။ အကွက်ကိုနှိပ်ခြင်းဖြင့် သင်၏သဘောတူလက်ခံမှု (သို့) သတ်မှတ်ချက်များ အသစ်ပြောင်းလဲပြီးမှ ဆိုက်ကို သင်ဆက်လက်အသုံးပြုမှုသည် သတ်မှတ်ချက်များ ပြောင်းလဲခြင်းကို သင်ပူးပေါင်းသဘောတူလက်ခံမှုအား အကျိုးရှိရှိဖြစ်ပေါ်စေသည်။ သင်သည် အသစ်ပြောင်းလဲမှုတခုခုကို သဘောမတူပါက သင့်အကောင့်မှတ်ပုံတင်ခြင်းကို အဆုံးသတ်ခြင်း (နှင့်/သို့) ဆိုက်ကိုအသုံးပြုမှုရပ်ဆိုင်းခြင်းကို ချက်ခြင်း ပြုလုပ်နိုင်သည်။
အဆုံးသတ်ခြင်း သင်သည် သင့်အကောင့်မှတ်ပုံတင်ခြင်းကို အဆုံးသတ်ခြင်း (သို့) ဆိုကအသုံးပြုမှုရပ်ဆိုင်းခြင်းကို အသိပေးခြင်းမရှိပဲ အချိန်မရွေးပြုလုပ်နိုင်သည်။ အပိုင်း ၂၊ ၅၊ ၆၊ ၈၊ ၉၊ ၁၀၊ ၁၁၊ ၁၂၊ ၁၃၊ ၁၄၊ ၁၅၊ ၁၇၊ ၁၉၊ ၂၁ နှင့် ၂၃ များ အဆုံးသတ်သွားမည်။
Notices. အသိပေးမှုများ HTC သည် ဆိုက်ပေါ်တွင် အသိပေးမှုတင်ခြင်း (သို့) ထိုအသိပေးမှုကို အီးမေးလ်တခုခုသို့ပို့ခြင်း (သို့) HTC သို့သင်ပေးထားသော လိပ်စာသို့စာပို့ခြင်းများအပါအဝင် HTC မှပေးရန်လိုအပ်သော ဥပဒေဆိုင်ရာနည်းလမ်းများနှင့်သက်ဆိုင်သည့် အသိပေးမှုအားလုံး (တရားဝင် လုပ်ဆောင်ချက်အပါအဝင်)ကို သင့်အား ပေးလိမ့်မည်။ သင်သည် သင်၏အီးမေးလ်လိပ်စာနှင့် နေရပ်လိပ်စာတို့ကို လက်ရှိ အတိုင်းရှိရန်နှင့် ဆိုက်ပေါ်တွင်တင်ထားသော အသိပေးမှုများကို ကြည့်ရှုရန် သဘောတူရမည်။ သင်သည် HTC သို့ အသိပေးမှုကို စာဖြင့်ပို့ခြင်းဖြင့် HTCအသိပေးမှုပို့ရန် သဘောတူရမည်။ “ တရားဝင် အသိပေးမှုများအတွက် လိပ်စာ ” သည်
HTC Corporation HTC ကော်ပိုရေးရှင်း
Legal Department တရားဥပဒေဌာန
HTC အမေရိကား Inc.၊
အမှတ် ၁၃၉၂၀၊ SE အရှေ့ဂိတ်လမ်း(အီ့စ်တ်ဂိတ်ဝေးလ်)၊ ဆူ့တ် ၄၀၀
ဘဲလ်လဗျူး၊ WA ၉၈၀၀၅
အထွေထွေ ဤသတ်မှတ်ချက်များ၏ အပိုင်းတစ်ခုခုသည် မှန်ကန်ခြင်း (သို့)ခိုင်မာခြင်းမရှိဟု ဥပဒေပြဋ္ဌာန်းသည့် အာဏာပိုင်များက သတ်မှတ်ပါက ထို မမှန်ကန် (သို့)မခိုင်မာသော သတ်မှတ်ချက်ကို မူလရည်ရွယ်ချက်နှင့်အလွန်ကိုက်ညီမှုရှိပြီး မှန်ကန်သော (သို့) ခိုင်မာသော သတ်မှတ်ချက်နှင့် အစားထိုးမည်ဖြစ်ပြီး ကျန်သတ်မှတ်ချက်များမှာ မူလအတိုင်းဆက်လက် အကျိုးသက်ရောက်မည်။ ဤသတ်မှတ်ချက်များမှ အပိုင်းခေါင်းစဉ်များသည် ပါတီများအဆင်ပြေခြင်းအတွက်သာ အသုံးပြုပြီး တရားဝင် (သို့) သဘောတူထားသော အဓိပ္ပါယ် မရှိပါ။ HTC သည် ဤသတ်မှတ်ချက်များအားလုံး (သို့) တစိတ်တပိုင်းကို သင့်အား အသိပေးပြီး (သို့) အသိမပေးပဲ မည်သည့်အချိန်တွင်မဆို ပြဌာန်းမည်။ သင်သည် ဤသတ်မှတ်ချက်များကို မပြဌာန်းနိုင်ပါ (သို့) ဆိုက်တွင် သင်၏အခွင့်အရေးများကို ပြဌာန်းခြင်း၊ ရွှေ့ပြောင်းခြင်း (သို့) လိုင်စင်ထပ်ပေးခြင်း မပြုလုပ်နိုင်ပါ။ သင် (သို့) အခြားသူများမှ ချိုးဖောက်ခြင်းအပေါ် ဆောင်ရွက်ရန် HTC ၏မှားယွင်းမှုသည် နောက်ဖြစ်လာမည့် (သို့) ဆင်တူသော ချိုးဖောက်မှုများနှင့်သက်ဆိုင်သော ၄င်း၏လုပ်ပိုင်ခွင့်ကို လျော့ပေါ့ပေးမည်မဟုတ်ပါ။ ဤသတ်မှတ်ချက်များတွင် (ကိုယ်ရေးလျို့ဝှက်အချက်၊ အပြုအမူနှင့် အခြား ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်သော သတ်မှတ်ချက်များအပါအဝင်) သင်နှင့် HTC အကြား ဆိုက်နှင့်သက်ဆိုင်သော သဘောတူညီမှုများ ပါဝင်သည်။ သင်နှင့် HTC အကြား ယခင်က (သို့) လက်ရှိ ရှိခဲ့သော ဆက်သွယ်ခြင်းများအားလုံးကို ဤသတ်မှတ်ချက်များနှင့် ပယ်ဖျက်အစားထိုးသည်။ ဒေသအလိုက်လိုအပ်ချက်များအတွက် သတ်မှတ်ချက်များ၏ ဘာသာပြန်ဆိုမှုအားလုံး ပြုလုပ်ပြီးဖြစ်သည်။ အင်္ဂလိပ်ဘာသာနှင့် အင်္ဂလိပ်မဟုတ်သော ဘာသာတခုခု အကြား အငြင်းပွားစရာရှိပါက အင်္ဂလိပ်ဘာသာနှင့် သတ်မှတ်ချက်အား အတည်ယူမည်။
အထောက်အပံ့ ကျွန်ုပ်တို့သည် ဆိုက်၏ သီးသန့်အပိုင်းတစ်ခုအတွက် အသုံးပြုသူအထောက်အပံ့ ပေးသည်ဟူသော သတင်းအချက်အလက်အား ဆိုက်တွင် မဖော်ပြထားပါက HTC သည် ဆိုက်အတွက် အသုံးပြုသူအထောက်အပံ့၊ ဆိုက်တွင်ရှိသော မည်သည့် လုပ်ဆောင်ချက် (သို့) ဝန်ဆောင်မှုကိုမှ မပေးပါ။
မူပိုင်ခွင့်နှင့် ကုန်အမှတ်တံဆိပ်အသိပေးမှုများ အသုံးပြုသူအကြောင်းအရာမှလွဲ၍ ဆိုက်နှင့် ဆက်နွယ်နေသော ပေးထားသော အကြောင်းအရာအားလုံးသည် © ၂၀၁၁ HTC ကော်ပိုရေးရှင်း (နှင့်/သို့) ၄င်း၏ ပစ္စည်းတင်သွင်းသူများ၊ 23 Xinghua Road၊ Taoyuan District၊ Taoyuan City 330, Taiwan ။ မူပိုင်ခွင့်အားလုံး မှတ်ပုံတင်ပြီး။ မူပိုင်ခွင့်နှင့် ဥာဏ်ပညာဖြင့် တီထွင်ဖန်းတီးထားမှုနှင့်သက်ဆိုင်သော ပိုင်ဆိုင်မှု ဥပဒေများနှင့်ကျမ်းများသည် ဆိုက်တွင်ရှိသော မည်သည့် ဆော့ဖ်ဝဲလ်နှင့်အကြောင်းအရာကိုမဆို ကာကွယ်ပေးသည်။ HTC ကော်ပိုရေးရှင်း နှင့်/သို့ ၄င်း၏ ပစ္စည်းတင်သွင်းသူများသည် ဆိုက်တွင်ရှိသော ခေါင်းစဉ်၊ မူပိုင်ခွင့် နှင့် အခြားသော ဥာဏ်ပညာဖြင့်တီထွင်ဖန်းတီးထားမှုနှင့်သက်ဆိုင်သော ပိုင်ဆိုင်ခွင့်များ၊ HTC အကြောင်းအရာ၊ တုံ့ပြန်ချက်နှင့် ဆော့ဖ်ဝဲလ်တခုခု (ဆိုက်မှတဆင့် သင့် HTC ဖုန်းပေါ်သို့ ဒေါင်းလုပ်လုပ်ပြီး ထည့်သွင်းထားသည့် ဆော့ဖ်ဝဲလ်အတွက် အသစ်ပြောင်းခြင်းနှင့် အဆင့်မြင့်ခြင်းတို့အပါအဝင်)ကို ပိုင်ဆိုင်သည်။ ဆိုက်ပေါ်တွင် ညွှန်းဆိုထားသော HTC လိုဂို၊ HTC ၏ တည်ငြိမ်၍ ထူးခြားသော လိုဂို (နှင့်/သို့) အခြား HTC ၏ ထုတ်ကုန်ပစ္စည်းအမည်များနှင့် ဝန်ဆောင်မှုများသည် HTC ကော်ပိုရေးရှင်း၏ အမှတ်တံဆိပ်များဖြစ်သည်။ ဆိုက်ပေါ်တွင် ရည်ညွှန်ထားသော အခြား ကုမ္ပဏီအမည်များ၊ ထုတ်ကုန်ပစ္စည်းအမည်များ၊ ဝန်ဆောင်မှုအမည်များနှင့် လိုဂိုများအားလုံးသည် ၄င်းတို့နှင့်သက်ဆိုင်သော ပိုင်ရှင်များ၏ အမှတ်တံဆိပ်များဖြစ်သည်။